Casuus (midab) - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Casuus)
Kani waa maqaal ku saabsan midabka casuuska.
sRGBB (cs, cg, bl)
CMYKH (bx, bs, h, m)
HSV (m, j, c)
B: Lagu hagaajiyey [0–255] (byte)
H: Lagu hagaajiyey [0–100] (boqol)
Taajka boqortooyo wakhti hore jirtay
Casuus (Af Ingiriis : Purple; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa midab ka samaysan iskudhafka (iskudarka) labo midab oo kala casaan jaamud ah iyo buni. Marka laga fiiriyo muraayada (dhalada) Kumbuyuutarka, waxaa midabkan laga sameeyaa iskudarka buluuga iyo casaanka.
Marka la iskudhex daro sadexda midab ee Casaanka, Cagaarka iyo Buluuga ayaa sameeya midabo badan kuwaasi oo ka mid yahay midabkan casuuska ah. Samayskaas dhexdiisa waxaa midabka casuuska laga helaa buluuga iyo casaanka dhexdooda. Sidoo kale waxaa midabkan lagu helaa marka la kala goynayo (jarayo) midabada ayadoo la isticmaalayo habka afka qalaad lagu yidhaahdo 'CMYK color model, taasi oo midabkani ka soo dhex baxo cagaar, huruuda iyo madoowga.
Guud ahaan midabka casuuska ah waxaa markii ugu horeeysay laga dhex helay iskudar midabo badan uu samaynayay saynisyahan Faransiis haa sanadkii 1859kii.
1.1 Iskudarka Midabada
2 Midabo Kale
Iskudarka Midabada[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Saddex -xagalka violet
↑ Christine E. Barnes (1 February 2011). C&T Publishing Inc. ISBN 9781607051664 http://books.google.com/books?id=23rNl2hwk3AC&pg=PA18#v=onepage&q=magenta%20red%20violet%20color%20theory&f=false. Soo qaatay 27 July 2014. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Casuus_(midab)&oldid=222538"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 31 Oktoobar 2021, marka ee eheed 22:11.